Jwxo-shiil: Qabridahare Qalalaase ka Abuura, Xitaa Banaankiisa Xabado ka Rida! – Rasaasa News
Jul 29, 2010 Jwxo-shiil: Qabridahare Waa in Aan Qalalaase ka Ridnaa
“Qabridahare waa in aan dagaal ka ridaan, waana in aan isticmaalnaa hubkaan bixiyey iyo wax alaale wixii aan heli karo, magac aad ku adeegataan waan haysataan.” sidaasi waxaa yidhi Jwxo-shiil, xili uu Throyya kula hadlayey kuwo beeshiis ah oo jooga Baadiyaha Tuulada Gabo-gabo.
Magaalada Qabridahare ayaa waxaa baryahanaba joogay waftigii Nabada ee uruurka ONLF, waftiga ayaa waxay shirar ugu qabteen dawdeynaha reer Qabridahare fagaaraha Qabridahare.
Sida ay wararku sheegayaan Jwxo-shiil, ayaa halkaas u soo diray afar nin oo beeshiisa ah, oo inala yaal ku ah beelaha, waxayna nimankaasi ka qaybgaleen dhagaysigii Khudbadihii ay waftiga ONLF u jeedinayeen dadweynaha.
Afarta nin ayaa hub ku xabaashay Duudciid, waxayna fiidnimadii ka tageen magaalada Qabridahare. Waxay afarta nin la soo baxeen qoryahoodii, waxayna dib ugu soo guureen magaalada Qabridahre. Nimankan ayaa waxay istaageen afar meelood oo aad uga fog magaalada, balse la maqli karo xabada, kolkaas ayey tacshiir xaga magaalada u soo rideen.
Jwxo-shiil, oo ay hada u dhamaatay oo aan wax talo ah hayniin, lana sheegay in uu maskaxda ka khalkhashan yahay, ayaa amar ku bixiyey in hadii aan wax kale la tari karin in beeshiisu ay banaanka Qabridahare Xabado ka rid rido xiliga la hurdo.
Xiligaas waxay ahayd abaarihii 3:32 daqiiqo, xiliga Qabridahare oo ay dadku ku jireen xiliga ay hurdadu ugu macaan tahay. Dadweynaha qaarkooda dhagaha fudud ayaa maqlayay xabada, waxayna u qaateen in magaalada banaankeeda dagaal ka dhacay, kolkii ay baxeen waxay arkeen in xabadu tahay mid ay si kas ah u ridayaan.
Arintan habeen shabaaxa ah ayay dadweynaha reer Qabridahare u arkaan Daandaansi ay wado beesha Jwxo-shiil oo iyadu ku shaqaynaysa amarkiisa. Magaalada Dhagaxbuur ayaa ahayd magaaladii ugu horaysay ee ONLF shirar ku qabato, waxaana isugu soo baxay dadkii ugu badnaa ee abid shir isugu yimaada. Waftiga ayaa waxay magaalada joogeen saddex maalmood, waxayna gooni gooni ula hadleen ururada bulshada.
Dhagaxbuur, waa magaalo madaxda gabalka uu ka soo jeedo Jwxo-shiil, waana gabalka hadii uu damco in uu dagaal ka sameeyo uu si fudud uga samayn karo. Magaalada Dhagaxbuur waa magaalada ugu horumarka wanaagsan gabalada ay colaadu hore uga jirtay, wuuna ugga ba,aa in uu waxyeeleeyo arimaha horumarinta ee ka socda.
Waxaana daliil u ah, xabadaha uu xiliga habeenka Jwxo-shiil ku toosinayo caruurta huruda ee reer Qabridahare. Waxaan filayaa in reer Qabridahare ayna u baahnayn wax dambe oo loo sheego, balse ay inshoodu macalin tahay.